आज सुनको मुल्यमा गिरावट ! तोलाको कति छ ?
आज (मंगलबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । सुनको मूल्य मंगलबार ९१ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।
हिजो सोमबार तोलामा ९१ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्यमा तोलामा रु १०० ले गिरावट आएको हो ।
यस्तै, तेजावी सुन तोलामा ९० हजार ७ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै मंगलबार चाँदी तोलामा ९४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।